AFRICOM oo dooneysa in ay dib ugu soo laabato Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
AFRICOM oo dooneysa in ay dib ugu soo laabato Soomaaliya
Madaxa ugu sarreeyay Taliska Mareykanka ee Afrika, (AFRICOM) Gen. Stephen Townsen, ayaa Maamulka Madaxweyne Joe Biden, ku riixaya in ciidamada dalkaas dib loogu soo celiyo Soomaaliya.
WASHINGTON, USA - Lix bilood kadib markii Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, uu si lama filaan ah ciidamadiisa uga saaray Soomaaliya, Maamulka cusub ee Biden ayaa hadda wada qorshe dib loogu soo celinayo askartii Mareykanka dalka.
Madaxa Taliska Mareykanka ee Afrika, Gen. Stephen Townsen, ayaa hoggaanka ugu sarreeya Pentagon-ka u sheegay Talaadadii, in la joogo xilligii uu go’aan rasmi ah oo kama danbays ah uu ka gaari lahaa arrinkaan Pentagon-ka.
Wuxuuna carrabka ku dhuftay in ay adagtahay in tababarro, la talin iyo caawinaadba la siiyo ciidamada Soomaalida ayadoo meel fog laga hagayo.
Qiyaastii 700 oo askari ayaa ku suganaa Soomaaliya, ka hor amarkii Donald Trump, kuwaas oo taageerayay Ciidanka xoogga dalka oo dagaal ku dhawaad 15 sano socda kula jira Al-Shabab, oo ah kooxda ugu weyn uguna dhaqaalaha badan Al-Qaacda.
Mareykanka ayaa si toos ah ugu lug lahaa Militariga dalka, tan iyo markii maamulkii Madaxweyne Bush, uu markii ugu horreysay ogolaaday in duqeymo laga fuliyo Soomaaliya 2007-dii.
Ciidamadii laga saaray dalka ayaa intooda badan la geeyay waddamada Gobolka, duqeymaha dhanka cirka ah ee lagu qaadayo goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ayaana wali sii socda.
Billowgii bishaan ayay ahayd markii uu soo baxay war sheegaya in Pentagon-ku uu wado hindise cusub oo la doonayo in tababarayaal ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka, loogu soo dirayo Soomaaliya.